Hagayya 12, 2019
Bakka bu’aan hawaasa baqattoota Oromoo ka Afriikaa Kibbaa lammileen Itiyoophiyaa torbee darbe magaala johaanesbergitti hidhaman ammaa to’annoo poolisii jela jiruu jechuun dubbatan. Nahwii Musaa akka jedhanitti, Hawaasi Baqattoota Oromoo Afriikaa Kibbaa jiru warri kun akka gadi lakkifmaniif abukaatoo dhaabee mormaafii jira jedhan. Baqattootni ammas haalli jiru sodaachisaadha jedhu.
Torbee dabre wal dhabbii humna naga kabachiistota mootummaa Afriikaa kibbaan ka to’annoo jela oolfaman lammilee itiyoophiyaa 650 ol tahuu jedha hawaasi baqattoota Oromoo Afriikaa Kibbaa. Nahwii Musaa dursaan hawaasa baqattootaa Sagalee Ameerikaaf akka himanitti warra hidhame kana keessaa amma nami caalu harka poolisii magaalaa Johaanisberg hidhaa keess jiraachuu dubbatan.
Obbo Nahwiin qabeenya baqattoota ilaalchisee gaaffii gaafatamaniinis haga yoonaa baqattoonni hojii isaaniitti waan hin deebi’iniif qabeenya duraa bade kana jechuun hin danda’amu jechuun dubbatan. Ammas baqattoonni magaala Johaanesburg jiraatan ka yaada isaanii nuuf kennan haalli jiru ammaa sodaachisaa dha jechuun dubbatu. Moosisaa Gaaddisaa lammii Oromoo Johaanesburg ganna kudhaniif Johaanesburg jiraatedha.
Nahwii Musaa dursaan hawaasa baqattoota Oromoo Afriikaa Kibbaa jiraatan akka jedhanutti; hawaasi baqataa biyyas jiru lammileen biyyaa waraqaa eyyama hojii qaban akka yeroon lakkifaman taasiseera jedhan. Warra hidhaatti hafe ka galmee male biyya keessa seeraan ala jiraata turan jedhamanis murtee akka argatan yaaluutti jirraa jedhu.
Obbo Nahwiin himati lammilee Itiyoophiya kun harka mana murtee waan jiruuf yoomitti murtee akka argatan beekuun rakkisaadha jechuun dubbatan.